Ezigbo Amaokwu AT&T | Martech Zone
Aburula onye ahia gi. Enwere m ma ekwentị ụlọ ma DSL site n'aka gị (na mbụ SBC). Ọrụ m na-amasị m mana ịchọrọ ị nweta nkwalite DSL yana iji nnukwu ọrụ TV ị nwere. See hụrụ, ụlọ m na-enye naanị ngwungwu bụ isi ma ọ ga-amasị m ịkwalite.
N'ime afọ ole na ole gara aga, ezigala ụfọdụ incredibly adọrọ adọrọ kpọmkwem ozi na-arịọ ka m nweta nkwalite. M ga-esi na ha banyere otu ugboro n’ọnwa kwara nke ọma m ulo. Otu ọnwa ị zitere ọbụna akwụkwọ agba zuru oke nke kọwara nchịkọta niile maka DSL na Television. Inwetara m… E reela m! Achọrọ m ịkwalite na U-Verse iji hụ Colts na-emeri na Sọnde n'ebube niile dị ebube.
Nke a bụ ihe ị na-egosi m… ma ee, adị m njikere!
Ya mere, m na-eleta NA & T.com wee pịa bọtịnụ Kwalite Ugbu a. Doh! Mbụ m ga-elele maka nnweta. Amaara m na ọ dị, ọ bụ ezie na onye agbata obi m na # 1324 nwere ọrụ ihe karịrị otu afọ (ọ kwapụrụ). Nke ahụ dị na akụkọ nke atọ… Anọ m na akụkọ nke abụọ. Yabụ, m nyefere adreesị m na nọmba ekwentị…
Ajuju mbu m, Ezigbo AT&T, bụ ihe kpatara ị ga-eji zipụ mgbasa ozi na adreesị m maka afọ gara aga na-arịọ ka m kwalite ọrụ gị ma ọ bụrụ na ọ nweghị n'ezie (nke m maara na ọ bụghị eziokwu). Spent mefuola obere ego na akwụkwọ ozi a mgbe niile. …
Oh well… M kpebiri na m ga-esi ụzọ ọzọ. M pịa na Nkata Online ugbu a ọrụ na ibe gị. M na kwụ n'ahịrị na 15 ahịa na-eche. Echere m na ị nwere ike idebe ya ugbu a. M pịa nso na windo ma kpebie ịkpọ kama. M pịa Kpọtụrụ Anyị… ekele ị nwere nọmba ekwentị dị.
Ekwentị na-aza site na akpaghị aka olu ma gwa m ka m tinye nọmba ekwentị akaụntụ m. M na-eme. Ọ na-ajụzi m ihe m ga-achọ ime, m jiri nlezianya kwuo "Nweta U-Amaokwu" na-eche "U-Amaokwu" bụ ezigbo ezigbo ụda jide. Mba go… “Ewela iwe, Aghọtaghị m ihe ị rịọrọ gị.” Ugbu a, enwere m ntakịrị nkụda mmụọ. "Nweta nkwalite na U-Amaokwu"… na-arụ ọrụ.
Usoro ahụ na-agwa m na enweghị m ike ịkwalite, m ji ụfọdụ ụdị nguzo azụ. Yabụ, akwụrụ m ya na ekwentị site na kaadị kredit site na ịpịnye nọmba m niile. N’ịchọ ịmata ihe mere ị gwaghị m nke a na ibe weebụ ebe m banyere wee rịọ maka ọrụ ahụ.
Ka o sina dị, ejikọtara m na onye nnọchiteanya, Shannah, ọ dịkwa egwu. Anyị nwere obere okwu gbasara Colts na-akụ ndị nsọ ụka na ngwụsị ụka a. Ọ na-agwa m na di ya bụ onye ofufe Bears. M na-ajụ, "Ha ka nọ na NFL?". O si na nke a wute ya. Ọ na-agwa m usoro ya na-ekwu na ọ nweghịkwa. Ana m agwa ya na onye agbata obi m nwere ya, ọ na-ajụ adres ha. Ekwesịrị m ịgbapụ n'ụlọ ahụ, arịgo arịgo, ma nweta nọmba ahụ. M na-agbada azụ gwa ya # 1324.
Ọ gara n'ihu na-eche na ọ na-enwe ọganihu. Obi dị m ezigbo ụtọ. Mgbe ahụ, oku na-ada.
Ọ dịghị onye na-akpọghachi… Echere m na usoro ahụ esoghị nọmba m ma enweghị m ụzọ m ga-esi jide Shannah ugbu a iji gaa n'ihu nchụso. Agbalịrị m ịkpọtụrụ onye ọrụ ahụ nke ugboro abụọ mana ugbu a, echerekwa ọzọ.
Ya mere,… M gara na ebe nrụọrụ weebụ ọzọ wee kpebie ide ozi email. M pịa Kpọtụrụ Anyị na ala nke na peeji nke na ụdị “Nweta nkwalite ka Na-Amaokwu” n’ọhịa na nke ahụ dị. M pịa pịa na peeji nke reloads na di na nwunye e-mail nhọrọ n'okpuru. M pịa mbụ e-mail nhọrọ… na kama nke adreesị ozi-e ma ọ bụ ụdị, m na-n'ihu na a njikọ azụ U-Amaokwu weebụ. Nke ahụ bụ saịtị m nọrịị.
Ọ na-eme m ka m nwee mmasị ịmata ma ọ bụrụ na ịnwee saịtị gị jiri nyocha nke onye ọrụ iji chọpụta etu ọ dịịrị ndị ahịa gị mfe ma ọ bụ sie ike iji ọrụ gị n'ịntanetị. M na-eche ọtụtụ narị narị ma ọ bụ puku ndị ahịa ndị ọzọ dị njikere ịkwụ ụgwọ karịa ma bụrụ ndị ahịa bara uru karị na nzukọ gị - mana enweghị ike.
E nwere ya, AT&T. Adị m onye ahịa (nwere obi ụtọ) nke na-achọ ịkwalite akaụntụ ha. Emego m kwụọ ụgwọ m, enwere m ego, ma ị na-eresị m ahịa ka m mee ya afọ ole na ole. Really chọrọ n'ezie ka m nweta nkwalite, nri? Ọ bụrụ na ịmee, ebe nrụọrụ weebụ gị abụghị nke kachasị, nkata ịntanetị gị anaghị edobe, usoro gị ezighi ezi, ekwentị gị nwere ike ịhapụ oku m.
Adị m njikere mgbe ị nọ.
O doro anya na nke ahụ abụghị taa.
Tags: ịzụ ahịa ezumikeNtughari htaccessnnwale dị iche ichenhazi asụsụwarara nchekwaOunye!WordPress
Feb 6, 2010 n’elekere 10:36 nke abali
Enwere m otu ahụmahụ ahụ na amaokwu. Odi egwu. Achọrọ m ka ọ jọ njọ. Enwetara m ozi ịntanetị na ọbụna ịkpọ oku telivishọn banyere ya. Ọrụ adịghị na mpaghara anyị. Na mkpokọta, ahụtụbeghị m ụlọ ọrụ jọgburu onwe ya n'ijere ndị ahịa ha ozi.
Nke ahụ na-ada ụda dị ka nsogbu. Did nwetụla mgbe nweta nkwalite ị na-achọ? Onwe m, ọ ga - akara m mma ịrapara na ọrụ ntanetị efere m. Adịla m onye debanyere aha ogologo oge na nso nso a ghọrọ m onye ọrụ. Efere nwere ọtụtụ HD ọwa karịa onye ọ bụla ọzọ na ụlọ ọrụ yana nnukwu azụmahịa dị ka HD n'efu maka ndụ. Ọzọkwa enwere ihe ndị ọzọ ị ga-echekwa maka, dịka ịtụkwasị obi. Mgbe ị na-enweta ọrụ ntụrụndụ / nkwukọrịta gị niile sitere na otu isi, ọ bụrụ na mmadụ nwere nsogbu, ha niile na-eme ya. Ọ dịkarịa ala ma ọ bụrụ na otu n'ime ọrụ m nwere nsogbu mgbochi m ka nwere ike ịnụ ụtọ ndị ọzọ.